AFT Andavamamba: 12 ny karazan’amponga arantin-dRagasy | NewsMada
AFT Andavamamba: 12 ny karazan’amponga arantin-dRagasy
Na ny vahiny na ny Malagasy, samy variana avokoa raha mandalo ao amin’ny Alliance française Antananarivo etsy Andavamamba. Karazana amponga maro fahita eto an-toerana sy any ivelany no harantin-dRagasy…
Ankoatra ny maha lehiben’ny tarika azy, mpikaroka sady mpanamboatra amponga Ragasy. Ao anatin’ity herinandro ity, ho tazana etsy amin’ny Alliance française Andavamamba (AFT) ireo asan’ny tanany ireo. « 12 ny tonga eto fa mbola mahavita hafa ankoatra ireo aho. Somary mila vola misimisy mantsy ny fanatanterahana izany », hoy izy, omaly, nandritra ny fanokafana ny fampirantiana. Sady mahavita amponga malagasy no mahay manamboatra amponga avy any ivelany Ragasy, raha ny nahitana azy teny an-toerana. Anisan’ny miranty ao amin’ny efitrano malalaky ny AFT Andavamamba ny karazana amponga : mazavaloha, amponga maroanaka B52, ny ampongabe, ny tary, ny amponga lahy, ny amponga kambana, ny amponga vy, ny djembe, ny marovakana, ny carron, ny conga, ny trotrobe.
Ankoatra ny fampirantiana, afaka mitafa mivantana amin’ity mpikaroka ity avokoa ny olona tonga eny an-toerana. « Mila ampahafantarina ny olon-drehetra na Malagasy io na vahiny fa manana ny maha izy azy ihany koa ny asa tanana malagasy sy ny kolontsaina malagasy. Afa-milahatra tsara amin’ny vita avy any amin’ny firenen-kafa », hoy Ragasy.
… Hitohy avy hatrany amin’ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ao amin’ny AFT Andavamamba ity fampirantiana ataon-dRagasy ity. Ny zoma 5 avrily amin’ny 5 ora hariva, fampisehoana an-tsehatra hiarahana amin’ny tarika Ragasy Band sy ny Raozin’i Gasikara ary ny Faribolana Sandratra. Amin’io fotoana io no hanehoan’ny tarika Ragasy Band ny fiarahan’ny amponga namboariny amina zavamaneno hafa.